Michael Carrick Oo Ka Hadlay Sababtii Uu Keydka U Dhigay Cristiano Ronaldo Kulankii Chelsea
HomeWararka CiyaarahaMichael Carrick oo ka Hadlay Sababtii uu Keydka u dhigay Cristiano Ronaldo Kulankii Chelsea
November 29, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Ingiriiska, Warka Xiisaha Leh 0
Michael Carrick ayaa ku adkaystay inuu go’aansaday inuu kursiga kaydka dhigo Cristiano Ronaldo kulankii Manchester United ee Premier League ay la ciyaareen Chelsea.
Ronaldo ayaa si la yaab leh looga reebay shaxda XI ee Stamford Bridge, iyadoo Red Devils ay bedelkeeda safatay Bruno Fernandes oo weerarka ka garab ciyaarayay Jadon Sancho iyo Marcus Rashford .
Waxaa jiray soo jeedin ah in baaqa loogu yeero Ronaldo oo ku jira bedelka uu ka yimid Ralf Rangnick , kaasoo la filayo in loo xaqiijiyo inuu yahay tababaraha ku meel gaarka ah ee Man United maalmaha soo socda.
Si kastaba ha ahaatee, markii wax laga weydiiyay wararka xanta ah, tababaraha kooxda Carrick ayaa sheegay inuu go’aansaday inuu ka saaro xiddiga heerka caalami ee dalka Portugal.
“Taasi maahan arintu, maya (Rangnick ayaa go’aanka qaatay), waxaanu halkan ku nimid qorshe, waan garanayay sida ay Chelsea u ciyaari doonto, waxaana rabnay in aanu joojino baasaska Jorginho iyo Ruben Loftus-Cheek , waxa jiray isbedelo yar. si aan u cusbooneesino,waana waxa aan go’aansanay in aan maanta raacno,”Carrick ayaa u sheegay suxufiyiinta.
Sancho ayaa hogaanka u dhiibay kooxda martida aheyd daqiiqadii 50aad ee tartanka Stamford Bridge ka hor inta uusan Jorginho dhalin gool ku laad daqiiqadii 21aad ee ciyaarta.
Rangnick ayaa laga yaabaa inuu ku jiro kulanka Man United ee Premier League ee ay la ciyaarayaan Arsenal, kaasoo ka dhici doona Old Trafford fiidnimada Khamiista.